Imaaraatka Oo Iktishaaf Cusub Ku Sameeyey Meeraha Mars | Xaqiiqonews
Madax sare oo ka tirsan dowladda Imaaraatka ayaa baraha bulshada ku baahiyey iktishaafaat cusub oo Misbaarka Rajada ee Imaaraatka uu ka sameeyey meeraha gaduudan.
Maxamed Bin Raashid ayaa bartiis Tuwiterka ku baahiyey sawir uu misbaarka Rajada ka soo qaaday xilli gugeedka dhinaca waqooyi ee Meeraha Mars.
Bin Raashid waxa uu sheegay in Imaaraatka wixii hadda ka dambeeya ay qeyb ka noqon doonaan baaritaanada xog aruurinta caalamiga ah ee lagu sameynaayo meeraha gaduudan.
Bishii Febaraayo 2021 Imaaraatka ayaa shaaca ka qaaday in misbaarkii Rajada uu gaaray oogada sare ee Mars, arintaasi oo Dalkani yar ee carbeed ka dhigeysa dowladdii 5’aad oo aduunka oo dhan ah ee gaarta meeraha Mars.
Shaqada misbaarka Rajada ayaa sii socon doonto muddo 2 sano, u jeedkana waxa uu yahay in la helo dhammaan sawirada oogada meeraha dhammaan heerarkiisa kala duwaan maalin, habeen iyo dhammaan afartiisa xilli, shaqadaas ayaa qaadaneysa 1 sano xilliga Mars ah taasi oo u dhigmeysa 2 sano oo dhulka ah.
Mareykanka, Ruushka, Midowga Yurub iyo Hindiya ayaa iyaga horay u tagay Meeraha Mars .